Madaxweynaha Maamulka KMG Jubba oo dalbaday in waqtiga doorashada ay dhaceyso la kordhiyo – STAR FM SOMALIA
Hogaamiyaha Maamulka KMG ee Jubba Axmed Maxamed Islaam “Madoobe” ayaa ka dalbaday Baarlamaanka Maamulka Jubbaland inay waqti ku daraan xilliga rasmiga ah ee ay u asteeyeen inay dhaceyso doorashada Madaxtinimada Maamulka Jubbaland.
Isaga oo Saxaafadda kula hadlaayay Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose Madaxweyne Axmed Madoobe, wuxuu sheegay in waqtiga uu aad cidhiidhi u yahay islamarkaana loo baahan yahay in la galo olole doorasho oo xoogan.
Waxa uu sheegayaa Axmed Madoobe go’aanka waqti ku darista inay leeyihiin Xildhibaanada, balse isaga codsigaasi uu u jeedinaayo.
Dhinaca kale Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Jubbaland, ayaa sheegay inaysan waqtiga waxba ku dari doonin, doorashadana ay dhaceyso xilliga loo asteeyay.
Xildhibaankaan oo lagu magacaabo Shire Cabdi Maxamed, ayaa ku waramaayo in Baarlamaanka uusan waxba ka bedeli doonin 15-August oo ah waqtiga doorashada loo asteeyay ayna dhaceyso.
Dadka ka hadla arimaha Siyaasada Maamulka KMG ee Jubba ayaa sheegaya in siyaasada ka socota Magaalada Kismaayo ay la macno tahay nin dooran doorta, taasi oo ay ula jeedaan in Axmed Madoobe uu yahay ninka loo dooran doona Maamulkaasi, maadaama uu isaga isku duba ritay howsha socota.
Sabtidii lasoo dhaafay Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in 15-ka Bishan ay dhaceyso doorashada Madaxtinimada Maamulka Jubbaland.